လေးမနှင့် နာရီ ( ၂ ) | Layma's World
Filed under: Pieces, Wondering |
« လေးမနှင့် နာရီ လူသား ဘ၀ »
soemoe, on July 13, 2008 at 12:14 am said:
ညိမ်းညို, on July 13, 2008 at 3:53 am said:
ဟား..ဟား အမလေးမရေ ဖတ်ရတာပျော်စရာလဲကောင်း ကြည်နူးစရာလဲကောင်းတယ်ဗျာ 🙂 တို့အမကြီးကတော့ အခုထိညစ်ကျယ်ကျယ်နိုင်တုန်းပဲနော် 😛 ၀ယ်လာပေးတဲ့အကိုကြီး အဖြေတော်ပေလို့ 🙂
ကိုကောင်းကင်ကြီးက တကယ်ဝယ်လာခဲ့တာ ဟုတ်တယ်ဟုတ် 🙂
မိ, on July 13, 2008 at 11:40 am said:
သားကြွက်, on July 13, 2008 at 12:01 pm said:
အယ်….ဒီအဒေါ်ကြီး ခလေးတွေကို ခဏခဏ အူယားအောင်လုပ်တယ်ဂျာ…ဟားဟား အိပ်ပုပ်ကြီးတယ်တဲ့ သိသွားပြီး ကောင်းကင်ကြီး ကျေးဇူးကြောင့် 😛 “လေးကို ချစ်လို့အသည်းပုံပေးတာ… မိနစ်တိုင်း ချစ်နေမယ်… ကို့အသည်းနှလုံးကို ပေးထားတယ်… ကဲ… ဒီသဘော… အဲဒီသဘောနဲ့ဝယ်လာတာ… ပေါက်ပြီလား… ” တော်လိူက်တဲ့ ကိုကောင်းကင် ဒီစကားလုံးတွေမှာ မှ ဒေါ်လေးမ မကြွေရင် ဘယ်မှသွားကြွေတော့မတုန်း 😀
mtj, on July 13, 2008 at 1:17 pm said:
ဖတ်ရတာ ကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ 🙂
THS, on July 13, 2008 at 2:09 pm said:
ဘာဘီ နာရီက အသဲပုံ ပါနေလို့ပဲ နို့မို့ဆို ကိုကောင်းကင်ကြီး မလွယ်လောက်ဘူး ပြီးတော့ နောက်တစ်ခါ တိုင်ကပ်နာရီ မ၀ယ်ပေးရဲလောက်တော့ဘူးနော် 😛
nhn, on July 13, 2008 at 2:47 pm said:
လေးမရေ …ဖတ်ရတာမိုက်တယ်ဗျ….ဒါနဲ့ လေးမ…..ဒီ့ထက် နည်းနည်း ချဲ့ရေးပါလား ခင်ဗျ….စိတ်မရှိ နဲ့ဗျနော်….အိုင်ဒီယာလေး နှမြောမိလို့ပါ….ကျန်းမာပါစေ…..မိန်းမတွေက ယောက်ျားတွေအပေါ်ကော
ဘယ်လို joke ရှိပါလိမ့်….
ဝေလေး, on July 13, 2008 at 4:09 pm said:
MhawSayar, on July 13, 2008 at 7:42 pm said:
သိင်္ဂါရ ရသဆိုတာ ဒါလေးတွေပေါ့ဗျာ. သိပ်ကောင်းတယ်ဗျို့.. ကိုယ်ပါ ရောပြီး ကြည်နူးသွားတယ်.. 🙂
ဆက်ပြီး အားပေးလျက်ရှိပါကြောင်း 🙂
ShwunMi, on July 13, 2008 at 11:10 pm said:
အဇ္ဈတ္တပြခန်း, on July 14, 2008 at 12:52 am said:
စာရေးတာတော့ အတော်ကောင်းပဲဗျ. စာစုအနည်းလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ပဲ… ကြည်နူးတာထက် အူယားလာတာဗျာ.. ကျွန်တော့်မှလည်း ခဏခဏအရစ်ခံနေရလို့.. 😛 အားပေးနေမယ်ဗျို့ 🙂
chaos, on July 14, 2008 at 3:01 pm said:
Htoo Tay Zar, on July 14, 2008 at 5:49 pm said:
နှင်းပွင့်ဖြူလေး, on July 14, 2008 at 8:11 pm said:
ကလင် ကလင် ကလင် ကိုမုန်းလို့ နာရီတောင် မ၀ယ်ဘူး။ 😛
မွန်, on July 16, 2008 at 7:44 am said:
nu-san, on July 16, 2008 at 11:03 pm said:
“ရစ်” ချင်တဲ့လေးမရေ.. မိန်းကလေးတွေကို လက်ပတ်နာရီ၊ စားပွဲတင်နာရီ၊ တိုင်ကပ်နာရီလိုမျိုးတင်စားထားတဲ့ joke ကို အခု ညီမလေးပြောမှ သိရတယ်.. စိတ်ကူးသက်သက်က ပျော်စရာကောင်းပါတယ်နော်… ကောင်းကင်ကြီးက လေးမပေါ် ဒီထက်မက ပိုမယ်ဆိုတာ သိသာတယ်… 😀
မျှားပြာ, on July 24, 2008 at 9:10 pm said:
တကယ်ပဲဗျာ … ဘယ်လိုလေး ဖြစ်သွားမှန်း မသိဘူး …။
lay-ma, on July 30, 2008 at 12:11 am said:
>စိုးမိုး… ဘာဘီ ရုပ်တွေ အားကြီးပဲလား..။ ပျော်စရာကြီးနော်…။ အရမ်းဖတ်လို့ ကောင်းတာပဲလား..။ ကောင်းဆို… အဟဲ… ။
>ညိမ်းညို… စိတ်ကူးသက်သက်ပါ ဆိုနေမှ..။ နာရီ ၀ယ်လာတာကတော့ တကယ်ပါ.. ။
>မိ.. ယုန်ရုပ်ကို ငါတောင် မေ့နေတယ်…။
> သားကြွက် … ခလေးက ဘာကြောင့် အူယားတာတုန်း…။ မှတ်နော်… မှတ်နော်..။ ပညာယူထားနော..။
>ကိုအတာ … ခုချိန်မှာတော့ (သူများအကြောင်းဆိုတော့) ကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေမှာပေါ့ …။ တစ်ချိန် ချိန် လက်တွေ့ကိုယ်တိုင် အရစ်ခံရရင် စိတ်ရှုပ်လိုက်တာလို့မပြောမိစေနဲ့ …။
>တင့်ထူး.. တိုင်ကပ်ဝယ်လာလို့ ကတော့ .. ဟွန်း..ဟွန်း… တွေ့ သွားမှာပေါ့..။ ရှူး… ပြန်မတိုင်နဲ့ …။
ဘယ်လို joke ရှိပါလိမ့်…. ဆိုတာ လေးမ လည်း စိတ်ဝင်စားတယ်..။ လေးမ ကိုယ်တိုင်ပဲ joke စဉ်းစားပြီး လုပ်ရင် ကောင်းမလား…။
>ဝေလေး… တစ်ချိန်တော့ ဖြစ်မှာပဲ… ဟဲ..ဟဲ…။
>မှော်ဆရာ.. ကြည်နူးတယ်တဲ့… ကို ယ့်စကားကိုယ်မှတ်ထားနော်…။
>မီ.. ထတော့… မြည်နေပြီ…။
>ကိုပြခန်း… ကိုပြခန်း အရစ်ခံရပုံလေးတွေ အတု.ယူရအောင် ရေးပြလေ…။
>ခေးရော့စ်… စိတ်ကူးယဉ် အတည်… ဟုတ်ပ.. ဟုတ်ပ…။
>တေဇာ.. တကယ် .. မယုံကြဘူးပေါ့နော်…။ 😛
>နှင်းပွင့်ဖြူလေး.. နာရီ မုန်းတဲ့ သူတွေ ပါလား.. အဖော်ရပြီ…။
>မွန် .. မွန် ထင်တာ နီးစပ်ပါတယ်…။
>မနုစံ .. မရေ.. မက အတော်ဆုံး… သဘောအပေါက်ဆုံးပဲ…။
>မျှားပြာ… ဘယ်လို ဖြစ်သွားသတုန်း..။ တအားကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုပါလား..။
ကုမ်ရာသီသူ, on November 2, 2008 at 3:16 pm said:
အမလေးမရေ့၊ နာရီမုန်းတာ ဂိုဏ်းထောင်မယ်ဆို ကျွန်မလည်းပါမယ်နော်။ ဒါပေမယ့် အဲလို လက်ဆောင်ပေးတဲ့နည်းစနစ်ကိုတော့ ဟီး……. ကြွေချင်သား။ တကယ်မှတ်လိုက်မယ်နော်။